Male – Page4– Healthy Life Journal
ပန်းသေပန်းညှိုးဝေဒနာရှိရင် . . .(၃)
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါကုသနည်းတချို့ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမယ်။ ပန်းသေပန်းညှိုးပြဿနာရှိတဲ့ ယောကျာ်းတွေဟာ ဖိုလိင်ဟော်မုန်း (Testosterone) ကိုအားကိုးလေ့ရှိပါတယ်။ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါ ရှိသူတိုင်းအတွက် ဖိုလိင်ဟော်မုန်းကို အသုံးပြုကုသနိုင်ပါသလား။ အနည်းငယ်ရှင်းပြပါမယ်။ ဖိုလိင်ဟော်မုန်းရဲ့ အဓိကအာနိသင်တွေက (က) သန္ဓေသားအရွယ်မှာ မိခင်ရဲ့ သွေးထဲမှာရှိတဲ့...
ကျား၊ မ ဟိုနေရာ စိုလာတတ်တဲ့ ရောဂါ (Wet tip)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေဖြေကြားသည်။ မေးမြန်းသူ (၁)။ ။”ရောဂါတစ်ခုရှိနေပါတယ် ဆရာရေ။ ပြောရမှာတော့ ရှက်စရာကောင်းလှပါတယ်။ နားနဲ့ မနာဘဲ ဖဝါးနဲ့သာ နာစေချင်ပါတယ်။ Sexy girl တွေ ကြည့်တဲ့အခါ အမြဲတန်းလိုလို လိင်တံက Semen သုက်အရည်တွေ ထွက်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်...
အမျိုးသားတို့ ကြက်သွန်ဖြူစားလျှင် ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူး သုံးရပ်
ကိုမိုး ကြက်သွန်ဖြူက လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာ သင်သိပြီး ဖြစ်မှာပါ။ ကြက်သွန်ဖြူစားရင် ပါးစပ်နံတယ်ဆိုပေမယ့် သင့်အမျိုးသား စားရင် မဟန့်တားလိုက်ပါနဲ့။ ကြက်သွန်ဖြူစားတာကြောင့် အမျိုးသားတွေရရှိနိုင်တဲ့ သီးသန့် အကျိုးကျေးဇူး သုံးမျိုး ရှိနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ကာကွယ်မှု လေ့လာမှုတွေအရ...
ပန်းသေပန်းညှိုးဝေဒနာရှိရင် . . .(၂)
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ဖြေ။ ။ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းထားတဲ့ ကိုကျော်ကြီးရဲ့ မေးခွန်းကို ဆက်လက်ဖြေကြားပါမယ်။ (၁) ယောကျာ်းတွေရဲ့ လိင်သဘာဝတစ်ခုကတော့ အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာ အလိုအလျောက် လိင်တံတင်းမာ လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလက္ခဏာရှိရင် ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါဟာ...
လိင်တံကြီးဆေးထိုးပြီး နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာမျိုးစုံဖြင့် ရောက်လာသူတို့အား ကုသမှု
ပါမောက္ခဦးဦးကျော် (ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း လိင်တံကြီးလို၍ ဆေးထိုးခြင်း၊ ဆေးလိမ်းခြင်း၊ ဆေးသောက်ခြင်း စသည့် အပြုအမူများကို ခေတ်အ ဆက်ဆက်ကပင် အမျိုးသားအချို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြစ်ရာ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများအဖြစ် လိင်တံ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ထိခိုက်ခြင်း၊ ပုံမှန်အတိုင်းသွားလာလှုပ်ရှား၍ မရနိုင်ခြင်း၊ အမျိုးသားစွမ်းဆောင် နိုင်စွမ်းလုံးဝမရှိတော့ခြင်း...
ပန်းသေပန်းညှိုးဝေဒနာရှိရင် . . .(၁)
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) မေး. ကန်တော့ပါဆရာ . . ကျွန်တော့်အသက်က ၃၀ကျော်ပါ။ အိမ်ထောင်လည်းရှိပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများနေတဲ့အချိန်တွေဆိုရင် အတူနေဖို့ အဆင်မပြေဘူးဆရာ။ တစ်ခါတလေ လပိုင်းလောက်အထိကြာတယ်၊ အလုပ်ထဲမှာပင်ပန်းနေရင် ပိုဆိုးပါတယ်ဆရာ။ အဲဒါ ကျွန်တော်ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါ ဖြစ်နေတာလားဆရာ။ ကျွန်တော်အိမ်ထောင်မှုသုခရအောင်...
ပန်းအဖျား လှီးဖြတ်ပေးခြင်း (Phimosis and Circumcision)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ပန်းငုံတယ်ဆိုတာ ကျားအင်္ဂါရဲ့ထိပ်ပိုင်း ကွမ်းသီးခေါင်းကိုဖုံးထားတဲ့ အရေပြားက ဆွဲလှန်လို့ မရအောင် ပိတ်နေတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အကုန်လုံး ပွင့်သွားအောင် လှန်လို့ မရနိုင်လောက်တာကိုခေါ်တယ်။ မွေးကတည်းကနေဖြစ်တာပါ။ ပန်းအဖျားက ဆီးကောင်းကောင်း ထွက်နိုင်လောက်အောင် ပွင့်နေရမယ်။ ငယ်တုန်းမှာ အတွင်းပိုင်းသွားကပ်နေတာကို အရွယ်ရောက်ချိန်မှာ အပေါ်ဆွဲတင်ရင်...
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ မေး။ ။ ဆရာ . . အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ။ ဘယ်ကို ပြရမှန်းလည်း မသိ၊ ပြောရမှာလည်း ရှက်နေလို့ပါ။ ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ကျတာ ရက်ပိုင်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါ စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ သုက်လွှတ်မြန်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုမှကို...
အသက် ၄၀ကျော် နာမည်ကြီး အမျိုးသားတို့ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်အောင် ထိန်းသိမ်းနည်း လျှို့ဝှက်ချက်များ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ အမျိူးသားတွေအနေနဲ့ အသက် ၄၀ ကျော်တဲ့အထိ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေအောင် ထိန်းထားနိုင်တာက အရည်အချင်းတစ်ရပ်ပါပဲ။ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေအောင် ထိန်းထားပေးနိုင်မှသာ ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုရမှာပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်ရောခန္ဓာကိုယ်ပါ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေတဲ့ အသက် ၄၀ကျော် နာမည်ကြီး အမျိုးသားတွေရဲ့...
သုက်ရည်အရောင်က ညိုညစ်ညစ်ဖြစ်နေတယ် . . .
မေး။ ။ သုက်ရည်အရောင်က ညိုညစ်ညစ်(ညိုမည်း မည်း)ဖြစ်နေတာ ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်ပါသလား။ ရောဂါကြောင့် ဖြစ်တာလား၊ ပုံမှန်အတိုင်းပဲလားဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ရောဂါကြောင့်ဖြစ်တာဆိုရင်ဘယ်လို ကုသရမလဲ။ ကိုတိုး၊ တာမွေ။ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွှန့် ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ အမျိုးသားတွေမှာ သုက်ရည်အရောင်ဟာ နို့ရည်လို ခပ်ပျစ်ပျစ်ချွဲချွဲဖြစ်ပါတယ်။...